ALOE: GURYAHA DAWOOYINKA IYO KA HORTAGGA - SOOSAARKA DALAGGA
Aloe waa dhakhtarka gurigaaga. Sidee loo isticmaalaa daaweynta?
Aloe - warshad badanaa laga heli karaa ururinta ubaxyada ubaxa hiwaayadda. Marka laga soo tago dekeddaha, waxay sidoo kale leedahay bogsiinta guryaha. Thanks to iyaga, aloe waxaa loo isticmaalaa ujeedooyin caafimaad.
Waxyaabaha kiimikada iyo guryaha
Goobaha faa'iidada leh ee aloe ayaa la ogaaday muddo dheer. Hase yeeshee, hannaankiisa weli lama aqoonin, laakiin hadda waxa la og yahay in ay ka mid tahay:
Catechin - saameynta antiallergic, saameyn ku leh maraakiibta dhiigga.
Taniinada - waxay leeyihiin bakteeriyada, anti-bararka, dabeecada iyo qalabka xayawaanka.
Flavonoids waxaa loo yaqaannaa antioxidants, antispasmodics, ka saaro kansarku jirka, la dagaallanka fayrasyada.
Calaamadaha raadraaca - naadir u samee metabolism, ka saar shimbiraha iyo sunta, kordhiya difaaca jirka, caadiyan heerka heerarka kolesteroolka ee dhiigga.
Vitamiin - lagama maarmaan u ah hawlaha caadiga ah ee noolaha.
Aqoonyahan caan ah, aqoonyahanka V.P Filatov ayaa shaaca ka qaaday habka foosha ee aloe. Waxa uu ku andacoonayaa in la badbaadiyey 2 todobaad 4-8 digrii caleemaha waxay soo saartaa kiciyaasha noolaha taasoo, marka la isticmaalo, waxay kordhisaa caabbinta jidhka ee saameynta waxyaabo waxyeelo leh.
Noocyada daawada loo isticmaalo
Cirridka aloe waa kala duwan yahay, laakiin kaliya 15 nooc oo kala duwan ayaa loo isticmaalaa ujeedooyin daaweyn. Qadarka ugu badan ee nafaqooyinka waxaa laga helaa Aloe Treelike, Xajmiga, Diinta, Sokotrinskoe, Cadaadiska.
Guryaha dawooyinka iyo ka hortagga
Guryaha ayuu bogsaday casiirka iyo saxarka. Wixii soo iibinta alaabta ceeriin ee isticmaalaya warshad da'doodu tahay 3 ilaa 5 sano. Iska yaree caleemaha ugu caansan, caleemaha qunyar-socodka, 15-20 sentimitir dherer ah oo leh qul-qallalan. Baqshadaha waxaa la dhigayaa bac ah waxayna ku jiraan qaboojiyaha 14 maalmood. Kadibna waa la maydhaa, iyo foomka la jajabiyey waxaa la dhigayaa cheesecloth si loo tuujiyo casiir.
Waxaad isticmaali kartaa dareeraha dareeraha ah isla markiiba ama diyaarinta xal khamriga ah (80 ml oo casiir ah 20 ml oo khamri ah). Xalka waa in lagu kaydiyaa dhalada madow ee qaboojiyaha.
Cunnooyinka qaarkood ayaa isticmaalaya cabitaan iyo waliba qashir. Si aad u sameyso gruel ka caleemaha, waxay ka qaataan filim iyaga ka mid ah oo xoqin.
Casiirka aloe iyo saxarka ayaa lagu dabaqaa gudaha iyo dibadda.
Gudaha waxay quseysaa:
Cudurada xubnaha unugyada dheef-shiid kiimikaad (calool-xanuun, calool-xanuun, calool-xanuun, caloosha caloosha)
Nidaamyada firfircoon ee xubnaha neef-mareenka (boronkiitada, oof-wareenka, qaaxada, neefta, boog-maskaxda, xajmiga pankreatitis)
Cilad-celin la'aan ku timaadda ragga
Cudurada xubnaha jirka dumarka (fibroids, adnexitis, cyst cyst, xanuunka caadada)
Dibadda codsiga waxaa lagula talinayaa:
Cudurada afka (stomatitis)
Dhibaatooyinka maqaarka (finanka, cambaarta, cudurka psoriasis, vitiligo, herpes)
Dhaawacyada maqaarka (nabarrada saafiga ah, gubashada, boogaha)
Dhibaatooyinka timaha iyo maqaarka (xaaraanta, timo luminta, cagaarshowga)
Sanka oo furma, sinusitis
Gaar ahaan waxay ku qeexeen dhakhaatiirtu inay saameeyaan difaac. Aloe wuxuu kordhiyaa sifooyinka jirka ee ilaalinta, ka soo kabashada cudurrada.
Casiirka iyo saxarka ayaa loo isticmaali karaa qaabka saafiga ah iyo qayb ka mid ah isku dhafan kala duwan oo leh qaybo kale. Daawooyinka, oo ay ku jiraan casiirka aloe, ayaa afka laga qaataa.
Iyada oo qabow, casiir cusub ayaa la geliyaa sanka. Si wax ku ool ah u isticmaal jaranjaro cusub oo la gooyey ee daaweynta nabarrada, gubashada.
Iyadoo guul weyn, casiir aloe cusub waxaa loo adeegsadaa kiknoolajiyada. Foornooyinka leh aloe waxay bixiyaan natiijooyin cajiib ah. Saameyn faa'iido leh casiir ku saabsan timaha iyo maqaarka. Waxay quudisaa timaha timaha, waxay ka hortagtaa timo luminta, qulqulaya qashinka.
Sida loola jeedo inaad lumiso miisaanka
Casiirka Aloe wuxuu faa'iido u leeyahay kuwa doonaya in ay lumiyaan miisaanka. Farsamada qalabkani waa wax-qabad yar oo calool-dhexaad ah iyo awoodda hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka gudaha jirka.
Tani waa daaweyn dadweyne oo gaar ah, haddii ay si haboon u diyaarsan tahay, waxay kuu oggolaaneysaa inaad iska saarto 6-7 kiilo garaam bishii. Casiirka ka soo shimbir, leh caarad qallalan ee caleemaha cabin shaaha laba jeer maalintii.
Niyadjabinta rasmiga ah ee rasmiga ah ma bixiyaan jawaab qeexan oo ku saabsan wax-qabadka. Si kastaba ha noqotee, dib u eegis lagu dalbado casiirka miisaan lumis, waxay muujineysaa in ay ka caawineyso la dagaallanka culeeyska.
Ha ku kaydin juice mustaqbalka, waxay lumin doontaa guryaha. Ha isticmaalin qalabka wax ka badan laba toddobaad oo isku xiga, waxay jahawareerin kartaa shaqada caadiga ah ee nidaamka dheef-shiidka.
Dalbashada aloe waa u taxadaraa. Ka hor intaadan isticmaalin, hubi inaad la tashato dhakhtar. Waa mamnuuc in la isticmaalo cudurada soo socda:
Cudurka iyo kalyaha
Cudurka qaaxada ee qaba cudurka qaaxada (hemoptysis)
Dalbashada dhir waxay noqon kartaa waxyeello. Daryeelka waa in ay qaataan iyada oo jiritaanka cudurrada mareenka caloosha iyo mindhicirka. Sababtoo ah waxtarka xoojinta ee ku dhaca xuubka perilstastika, cabitaanka aloe wuxuu keeni karaa bararka caloosha.
Codsiga wuxuu sidoo kale keeni karaa isu-imaanshaha fitamiinada jidhka, iyo tani waxay noqon doontaa falcelinta xasaasiyadda. Isticmaalka xad-dhaafka ah ee aloe wuxuu sababi karaa mindhicirka. Intaa waxaa dheer, aloe ka saaro macdanta jirka ka.
Aloe hypotonic waa in loo qaataa taxadar, sida aloe hoos u dhigo cadaadiska dhiigga.
Badanaa casiirka ayaa keena cuncun maqaarka ah xasaasiyad.
Waa mamnuuc in la qaato kalluunka inta lagu jiro uurka. Inta lagu jiro naas nuujinta, ogolaanshaha isticmaalka waa in uu bixiyo dhakhtar.
In kasta oo ay jiraan waxyaabo badan oo faa'iido leh oo bogsoonaya, xayawaanku wuxuu sababi karaa dareen-celinta xasaasiyadda. Waa noocyo badan oo ka mid ah walxaha ku jira casiirka taasoo keeni karta jawaab celinta qaar ka mid ah noolaha.
Dhab ahaan, dhacdadani waa mid aad u yar, laakiin wali waxaa la isticmaalayaa aloe, waa inaad si taxadar leh ula socotaa xaalada.
Calaamadaha soo socda waa inay u digaan:
Cudurka naasaha iyo raaxo la'aanta qaabka dareenka gubashada iyo cuncunka sanka ayaa muujinaya caabuqa sambabada.
Dhuun xanuun, hindhiso.
Urticaria, pruritus, finan.
Hadday dhacdooyinka noocaas ahi dhacaan, waa in la joojiyaa gaaska cadmeed ee loo yaqaan 'aloe vera', waana in la isticmaalo dawooyinka antiallergre.
Iyada oo taxaddar ba'an leh oo kaliya ka dib markaad la tashato takhtar waxaad u baahan tahay inaad codsato aloe si loo daaweeyo carruurta.
Waxay dhaawici kartaa!
In kasta oo faa'iidooyinkaas oo dhan, aloe waxay noqon kartaa halis ah.
Warshadani, marka loo isticmaalo si aan sax ahayn, waxay keeni kartaa barar xiidmaha. Waxay sidoo kale khatar u tahay dadka qaba dhibaatooyinka kelyaha.
Laakiin xitaa haddii la tilmaamayo isticmaalka, waa suurtagal in la dhaafo qiyaasta daawada.
Saameynta ay ku jirto cayayaanka aloe ee cudurada qanjirada ayaa weli aan si buuxda loo baarin, inkasta oo daawada dadku ay ku talinayso in ay u qaadato burooyinka caloosha, malawadka, ilma-galeenka.
Daawooyinka rasmiga ah ee looga soo horjeedo isticmaalka casiirka kiisaskaas xitaa xitaa waxay ka digayaan khatarta ay u hayaan dadka qaba cudurada la midka ah.
Isticmaalka khatarta aloe ee noocyo badan oo dhiigbax ah, oo loogu talagalay bukaanada qaba dhiig karka, xadgudubyada aloe caadada caadada ah waxay noqon kartaa sunta dhabta ah.
Dhibaatooyinka aan la saadaalin Karin waxay sababi kartaa xayawaan carruurta ilaa 12 sano. Sidaa darteed, haddii aad leedahay caruur yar oo gurigaaga ah, taxadar markaad koraan ubax.
Aloe waa halis ah xayawaanka raba!
Haddii aad leedahay bisad guriga, iska jooji kalluunka. Xayawaanka murugsan ayaa hubaal ah in ay rabaan in ay nibble yihiin casaanyo casiir leh. Wixii bisadaha, juice geedka waa sun. Waxay keentaa matag, shuban, cuncun kalyaha iyo xitaa dhimashada saaxiibkaaga afar-dhinac ah.
Tixgeli dhammaan calaamadaha iyo khilaafaadka isticmaalka aloe, iyo dhirtaas ayaa kuu noqon doona bogsiiye dhab ah oo gurigaaga ah.
Hadda oo aad ka ogtahay sifooyinka bogsiinta aloe, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad bilawdo this warshad cajiib ah at guriga. Xeerarka daryeelka ee aloe, waxaan u sheegay in ay wax noo.
Sawirro badan oo aloe waxtar leh hoosta ka eeg:
Dhirta mucjisada Aloe motley (tuug)
Sifooyinka qulqulaya aloe qulqulaya
Geedka Aloe Geedka
Aloe: dhirta, koraan, dhufto
Sidee loo beeraa aloe guriga? Xeerarka Cuntada ee Aloe
Aloe - laga bilaabo duurjoogta ilaa bogsashada guryaha
Ma xididka xayawaanku? Baro sababaha iyo hababka daaweynta!
Aloe xumbo hal mar hal sano ah? Waa maxay dhirta loo yaqaan "Agave"?
Aloe Homemade: Dhammaan Ku Saabsan Daryeelka Ku Haboon
Aloe Vera - Elixir caafimaad ee gurigaaga!
Aloe Vera - Guryaha dawooyinka iyo ka hortaga